Dowladda oo soo Dhoweysay Mukhtaar Roobow
Hadalka dowladda ayaa yimid, saacado kadib markii Roobow oo shir jaraa’id ku qabtay Muqdisho, uu sheegay inuu Al-Shabab ka baxay shan sano iyo toddoba bilood ka hor.
Dowladda waxa ay sidoo kale sheegtay in “iyada oo laga duulayo cafiskii Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, ay dowladdu ballanqaadeyso inay soo dhoweyneyso cid walba oo ka tanaasusha fikirka Al-Shabaab”
Dowladda federaalku waxay sheegtay inay u mahadcelineyso cid walba oo ka qeybqaadatay, kaalinna ka geysatay wadahadalka lala wado Roobow.
Dhinaca kalena hay’adda u doodda xuquuqda aadanaha ee Human Rights Watch, ayaa sheegtay in sharciga caalamiga ah uu mamnuucayo in cafis loo fidiyo dadka galay xadgudubyada culus, sida ay ku sheegtay qoraal kasoo baxay hay’adda.
Human Rights Watch waxay sheegtay in Mukhtaar Roobow uu door hoggaamineed ku lahaa Al-Shabaab xilli ay ururkaasi gaysteen weerarro aan loo meel dayin oo loo gaystay rayidka, iyo carruur xoog lagu qoray askarta iyo xadgudubyo kale.
Falastiin Axmed Iimaan ayaa arrintan ka waraysatay wasiirka warfaafinta ee dawladda Soomaaliya Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan.
Wareysi: Injineer Yariisow